Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Tanzania Travel and News momba ny fizahan-tany » Zanzibar dia nanambara ny kaody tsy maintsy arahin'ireo mpizahatany
Amin'ny toeram-bahoaka any Zanzibar, ny mpizahatany dia tsy maintsy manarona ny vatany hatrany an-tsoroka ka hatrany amin'ny lohalika.
Ireo mponina Zanzibar dia matetika no tohina amin'ny fisehoany sy ny tsy fahampian'ny fitafiana sasany amin'ny fialantsasatra sasany
Zanzibar dia hanasazy ireo mpitsidika noho ny fisehoany tsy mendrika
Miankina amin'ny hamafin'ilay fandikan-dalàna, ny mpizahatany dia afaka mandoa onitra 700 $ ka ho miakatra
Nahazo salan'isa mpizahatany 30,000 eo ho eo ny seranam-piaramanidin'i Zanzibar's Town Town tato anatin'ny volana vitsivitsy. Ny olona teny an-toerana dia taitra matetika noho ny fisehoana sy ny tsy fahampian'ny akanjo amin'ny sasany amin'ireo fialantsasatra. Avy eo nanapa-kevitra ny manampahefana ao amin'ny fanjakana afrikanina ny hampiditra kaody akanjo.
Ny minisitry ny fizahan-tany any Zanzibar Lela Mohammed Moussa dia nilaza fa ny sazy sy onitra dia hapetraka amin'ireo mpizahatany, mpitari-tolona ary mpikirakira fizahan-tany ho an'ny karazan'akanjo tsy mendrika apetraka ampahibemaso eto amin'ny nosy.
“Amin'ny toerana ampahibemaso any Zanzibar, ny mpizahatany dia tsy maintsy manarona ny vatany hatramin'ny soroka ka hatramin'ny lohalika. Tsy zava-baovao izany… Adidin'ny vahiny ny mahatakatra ny kolontsaina sy ny fitsipi-pitondrantena eny an-dalambe, ”hoy ny minisitra.
Miankina amin'ny hamafin'ilay fandikan-dalàna, ny mpizahatany dia afaka mandoa onitra 700 $ ka ho miakatra. Ireo mpandraharaha mpizahatany dia miatrika lamandy $ 1000-2000 sy miakatra.
Na eo aza ny fameperana mifandraika amin'ny COVID-19 sy ny kaody fady tsy maintsy atao vaovao, tsy nisy fihenan'ny famandrihana hotely sy fandraisam-bahiny tany Zanzibar.